नेपाली भाषामा लेखिएका प्राविधि सम्बन्धि व्लगहरु धेरै पढिन्छन्-कृष्ण गुरागाई - MeroReport
नेपाली भाषामा लेखिएका प्राविधि सम्बन्धि व्लगहरु धेरै पढिन्छन्-कृष्ण गुरागाई
१० बर्ष भन्दा बढी समयदेखि रेडियो क्षेत्रमा सक्रिय कृष्ण गुरागाँई सामाजिक संजालका प्रयोकर्ताहरु खासगरी ट्विटरमा सक्रिय हुनेहरुले सुनिरहेकै नाम हो । @kguragai नामले ट्विटिने र http://www.pipalchour.com/ मार्फत ब्लग गरिरहने कृष्णले अहिले उज्यालो नेटवर्कको व्यवस्थापन हेर्नुहुन्छ । मुलधारको संचारमाध्यमसंग आवद्द भई फरक कार्यक्षेत्र भएपनि सोसल मिडियाप्रति उहाँको लगाव लोभलाग्दो छ । ब्लग, फेसबुक, ट्वीटरमा समसामियक कुरा लेख्न मन पराउने उहाँ सामाजिक संजालहरुमा हुने प्राय बहसको Storify पनि गर्नुहुन्छ । टेक्नोलोजी र खेलकुदमा रुची राख्ने कृष्णसंग हामीले यस साता मेरोरिपोर्टको साताका ब्लगर स्तम्भमा कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ कृष्णसंग ब्लगिङ र Storify कै सेरोफेरोमा रहि प्रकाश लामिछानेले गर्नुभएको कुराकानी ।
मैले पहिलो व्लग मार्च २६, २०१२ मा पोष्ट गरेको हुँ । जुन मैले रेडियोको व्यवस्थापन सम्बन्धि तालिम लिन नेदरल्याण्ड जाँदा देखेका भोगेका अनुभव, संस्मरण थियो ।
आफुले देखे भोगेका कुरा अरुसँग बाड्न, मनको बह पोख्न अनि कहिलेकाहि डकुमेन्टेनसनका लागि ।
खासगरी ब्लगमा कस्ता कुराहरू लेख्नु रुचाउनुहुन्छ?
हिड्दा डुल्दाका देखे भोगेका अनुभव अलि धेरै लेख्छु । ती बाहेक खेलकुद, प्रबिधि, सम्बन्धि पनि केहि लेखेको छु । हरेक दिन २, ३ जना रेडियो सञ्चालक, रेडियोमा कार्यरत मानिससँग भेट हुन्छ । उहाँहरुसँग गफ गर्दा नेपालका रेडियोहरु कसरी चलेका छन्, कस्ता समस्या छन भन्ने लगायतका धेरै कुरामा छलफल हुन्छ । यस्ता बिषयहरु पनि ब्लगमा लेख्न पाए हुन्थ्यो भनेर मन हुटहुटिन्छ ।
पछिल्ला समयमा व्लगिङ गर्नेहरु बढेका छन्, ब्लगिङमा मान्छेको रुचि बढेको छ । भविष्य आशालाग्दो छ तर अहिले नै यसलाई पूर्णकालिन काम बनाएर गुजरा गर्ने दिन आईसकेको छैन भन्ने लाग्छ ।
तपाईसँग ब्लग लेख्दाको त्यस्तो कुनै रमाइलो वा सम्झनलायक अनुभव छ?
लेख्दाको भन्दा पनि लेखेर पोष्ट गरिसकेपछिको चाहि अनुभव रमाईलो छ। मैले केहि समय अघि "ट्वीटर र फेसबुकमा चोरको बिगबिगि"भन्ने व्लग लेखेको थिए । सो पोष्ट पढेपछि केहि साथीहरुले ट्वीटरमा अर्काले लेखेको ट्वीट/स्टाटसलाई कपी पेस्ट गर्दै आफ्नोमा हालेर खुब मनोरन्जन लिनु भयो । त्यो बेलामा एउटै स्टाटस १०, १२ जनासम्मले कपी पेस्ट गर्दा ओरिजिनल लेख्ने को हो भनेर चिन्नै मुश्किल हुन्थ्यो । सायद त्यो ब्लग नलेखेको भए त्यस्तो उल्का मनोरोन्जन हुन्नथ्यो कि भन्ने लाग्छ ।
तपाईंले त मुलधारको संचारमाध्यममा समेत कार्यरत हुनुहुन्छ, नेपालमा मुलधारका मिडियाले उठाउने बहस र सामाजिक संजालहरुमा बहसहरु उस्तै उस्तै हुन कि भिन्न भिन्न छन?
मुलधारे मिडियामा मूलत : राजनिति धङधङी बोकेका बहसहरु धेरै आउछन् । श्रोता, दर्शक र पाठक नचाहेर पनि त्यस्ता बहस सुन्न, पढ्न, हेर्न बाध्य छन् । मुलधारे मिडियामा आउने बहसहरुमा नेताहरु बढी समावेश र हावी हुन्छन र तीनकै बासी कुरा आउछन् । तर सामाजिक संञ्जालमा हुने बहसका बिषयहरु फरक र प्रभावकारी पनि छन् । बिषयको लिमिटेसन भएन, अनि यस्ता बहसहरु बढी सहभागित्तामक हुन्छन् । कुरोको चुरो अथवा समस्याको चुरो सामाजिक सञ्जालमा हुने बहसहरुबाट बढी थाहा हुन्छ ।
सामाजिक संजालहरुमा हुने बहसहरुले कहिलेकाँही फेसबुकका भित्ताहरु र ट्विटरका भित्ताहरु निकै तातिएका हुन्छन र ति सबैलाइ एकठाउँमा ल्याएर तपाइले बेला बेलामा स्टोरीफाइ पनि गर्नुहुन्छ? स्टोरीफाइ किन?
खासगरी ट्वीटरको टाईमलाईनमा जतिखेर पनि हेरिरहने फुर्सद सबैलाई हुदैन । यदि त्यस्ता बहसहरु स्टोरीफाई भएभने बहसमा सहभागि हुन नपाउनु भएका, बहसको बेलामा अनलाईन नहुनु भएका साथीहरुलाई पछि पढ्न काम लाग्छ । अनि यस्ता स्टोरीफाईहरुले कहिलेकाहि रेफरेन्सको काम पनि गर्छ । बिजय कुमारले दिशानिर्देश कार्यक्रमको बीचमा फोन उठाउदा भएको प्रतिक्रया खोज्न पर्यो भने अब कति जनाको टाईमलान चेक गर्ने ? त्यो पनि पुरानो ट्वीट भेट्न गार्हो पनि छ नि ! एउटै बिषयमा भएको बहसमा धेरै सहभागीको बिचारलाई एकै ठाँउमा पढ्दा मज्जा आउछ । तर आजकाल पहिलाजस्तो सक्रिय छैन स्टोरीफाईमा ।
स्टोरीफाइ र ब्लगिङ बिचको नाता वा सम्बन्ध?
नाता सम्बन्ध भन्दा पनि तपाईको ब्लगलाई रोचक, बनाउन स्टोरीफाईले मद्दत गर्छ जस्तो लाग्छ । जस्तै तपाई तिहार अनुभव सम्बन्धि ब्लग लेख्दै हुनुहुन्छ भने फेसबुक, ट्वीटर लगायतमा लेखिएका तिहारसम्बन्धिको रमाईला अनुभव, तथ्यांक, फोटाहरु जोड्नु भयो भने व्लग पढ्नेलाई मज्जा आउने भयो नि ।
ट्वीटर र फेसबुकमा चोरको बिगविगी, कतारको मिनी नेपाल,बन्जी अनुभव, संवेदना गुमाउदै हामी लगायतका पोष्टहरु धेरै हेरिएका मध्ये पर्छन् ।
ब्लग लेखेर मात्रै भएन, त्यसले पाठकको ध्यान तान्न पनि उत्तिकै जरुरी छ, हामीकहाँ लेखिने कस्ता ब्लगले धेरै जसो पाठकको ध्यान तानेजस्तो लाग्छ तपाइलाइ?
प्राविधिक बिषयमा त्यो पनि नेपालीमा लेखिएका ब्लगहरु धेरै हेरिन्छन जस्तो लाग्छ, त्यसपछि साहित्य हो कि । ब्लग र समाचार साईटहरुमा प्राबिधिक बिषय र साहित्य भन्दा पनि सेलेब्रेटीका गसिप, यौन सामग्री, दुर्घटना सम्बन्धि बिषयहरु छिट्टै चर्चित हुन्छन् । गम्भिर बिषयका समाग्रीले कमै ध्यान तान्छ नेपालका न्यू मिडियाका पाठकहरुलाई ।
माइक्रो ब्लगिकङमा हुने बहस र पुरा आर्टिकलका रुपमा लेखिने ब्लग एकै खाले छन् ?
कतिपय साथीहरुले माईक्रो ब्लगिङमा बिषयको उठान भएपछि व्लग लेख्नु भएको छ । तर माईक्रो ब्लगिङ र आर्टीकलको रुपमा लेखिने व्लगको बिषयहरुमा फरक छ ।
छिटो सञ्चार हुन्छ । २ बजेर ५ मिनेटमा घट्को घट्नाको समाचार सुन्न, हेर्न ३ बजेसम्मको समाचार कुर्न पर्दैन । अनि प्रतिक्रिया पनि छिट्टै पाईन्छ । तपाईले आफुलाई मासमा सजिलैसँग चिनाउन सक्नु हुन्छ । जसका लागि प्रत्यक्ष भेटको जरुरी पनि पर्दैन ।
तपाइको विचारमा सामाजिक संजाल सुचना र समाचारका लागि हो कि? बहसका लागि हो कि? विज्ञापनका लागि हो कि? मुलधारका संचारमाध्यमको विकल्पका रुपमा आएको अल्टरनेटिभ मिडिया हो कि मात्र मनोरन्जन हो?
मेरो बिचारमा तपाईले माथि भन्नु भएका सबै बिषयलाई सामाजिक संजालको प्रयोगबाट उपयोग गर्न सकिन्छ । पत्रकार र करेन्ट अफेयरमा चासो लिनेका लागि सूचना, समाचारका लागि होला, एनसेलका लागि बिज्ञापन होला, समाजशास्त्री, मानवशास्त्री, राजनितज्ञका लागि बहस होला । तर हाम्रो देशमा चाहि मुलधारे मिडियाको बिकल्पको रुपमा सामाजिक सञ्जाल पुग्न समय लाग्छ । यसको पहुँच, प्रयोग, भाषा लगायतका बिभिन्न कारणले हामी निकै पछि छौं ।
मुलधारको पत्रकारिता र ब्लग मार्फत गरिने नागरिक पत्रकारिता बिच केहि फरक छ ?
म पत्रकारिताका पढेको मान्छे होईन । तर काम गर्दा र संचार संस्थामा काम गर्दाको अनुभव के हो भने मुलधारको पत्रकारितामा लिमिटेसन हुन्छ । तपाईले सबैकुरा अभिव्यक्त गर्न सक्नु हुन्न । तर ब्लगमा तपाईले आफुले भन्न खोजेको कुरा मज्जाले लेख्न सकिन्छ।
ब्लगिङ्लाइ ब्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आचारसंहिता पनि चाहिन्छ भन्ने बहस पनि छ एकातिर, तपाइलाइ के लाग्छ, के यो जरूरी छ ?
सबैभन्दा पहिला त ब्लगर स्वंय जिम्मेवार हुनु पर्यो । चोरी नहोस भनेर मान्छेहरु तालाचावी लाउछन र पनि त्यसले चोरीलाई रोकेको छैन । ब्लगरका लागि आचारसंहिता पनि त्यस्तै कुरा हुन । यस बारेमा अलि बढी बहस र छलफल हुनु जरुरी छ ।
नेपाली ब्लगरहरुलाई बाहिर ल्याउनमा मेरो रिर्पोटले गरेको काम राम्रो छ । अहिले परियोजनाको रुपमा यो संचालन भएको मैले बुझेको छु । परियोजना सकिएपछि यसको भबिष्य के ? त्यो तर्फबाट अहिलेदेखि नै काम थाले राम्रो होला । अनि यसको पहुँच बढाउन पनि जरुरी छ भन्ने ठान्दछु ।
नोट: के तपाईँ पनि ब्लगिङ गर्नुहुन्छ? यदि गर्नुहुन्छ भने तपाइं पनि यो स्तम्भमा फिचर हुन सक्नुहुन्छ । कृपया आफ्नो ब्लग लिङ्क हामीलाइ पठाउनुहोस् । वा आफ्नो ब्लगको विवरण cj@meroreport.net मा इमेल गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ । तपाइंको ब्लग हेरेर हामीले निर्णय गर्नेछौं ।
Comment by sherbhhadur bhujel on November 8, 2012 at 2:02pm
ल है मेरेा पनी बधाइ सरलाइ
Comment by Krishna Guragain on November 7, 2012 at 4:28pm
धन्यवाद है सबैलाई :)
Comment by JawKnockRaazaa on November 7, 2012 at 2:15pm
आफु भाका बेला पार्टी नदिने चुइया लेन्दाइले नि कमेन्ट गरेछन् ! बधाई है कृष्ण सर ! :D
Comment by Lenin Banjade on November 7, 2012 at 1:49pm
लौ, खाँटी ब्लगर आउनुभो, बधाइ है :))
Comment by Pagal Basti on November 7, 2012 at 12:35pm
बभाइ हाम्रा तर्फ बाट पनि स्विकार होस
Comment by Prakash Lamichhane on November 7, 2012 at 12:22pm
बधाइ छ है कृष्ण जी । :) तपाइको ब्लग निरन्तर पढ्न पाइयोस् ।
Comment by Durga Lamichhane on November 7, 2012 at 12:19pm
Congratulation Krishna dai! Keep blogging!
Comment by सुजनचन्द्र पौडेल on November 7, 2012 at 12:16pm
badhai chha krishna jee :))